Maruva eimba - Brunfelsia | Art sens - mazano eimba nebindu
15.03.2019 Yakatumirwa na: Art Sense
Iro bindu, Pfungwa Pamba, Zvirimwa, Maruva eimba, Matipi
Brunfelsia (pachinzvimbo cheGerman botanist Otto Brunfels) inogara ichimiririra maruva ekunze uye anoyevedza anoyevedza maruva eimba, ayo munzvimbo yawo yemasango shrub nemiti midiki inosvika kumusoro kwe2-3 mita yakakwira. Ivo vanobva kumhuri Mbatatisi (Solanaceae) pamwe nezvevamiriri ve50, vamwe vacho i.es. Brunfelsia americana, Brunfelsia pauciflora, Brunfelsia australis yakasimwa uye inotengeswa kuti ishandiswe pamba. Zvinofadza, kunze kwekufanana kwekuona, maBrunfels anewo hukama hwepedyo hwemadzitateguru nePetunieae.
Ukuwo, sevanhu vazhinji vemhuri (eg Belladonna (Atropa belladonna)), maruva aya ane muchetura. Mitezo yavo yese, painenge ichechwa kana kumedzwa, inogona kukonzera matambudziko akati wandei nezvematamba nevanhu. Nekuti zvese zvirimo muchipimo, uhwu hunhu hunoita kuti Brunfelsia aporese nemaitiro akasiyana siyana ekurapa.
Brunfelsia, sese chero chinomera chinopisa, inoda unyoro, chiedza uye kudziya. Iyo yekupedzisira inofanira kugara uye iri pakati, nezhizha rakakurudzirwa muhuwandu 18-22 degrees uye chando 14-18. Tembiricha pazasi 10 madhigirii inokuvadza kune ruva. Mafungu uye kuchinja kwekushisa kwekukurumidza kunofanira kudzivirirwa.
Chiedza chinofanira kunge chakawanda, zvakanyanya kupararira, kwete kutungamira, izvo zvinogona kukonzera mashizha kuoma nekupisa. Iyo humidity inofanirwa kuchengetwa yakakwira sezvinobvira uye iyo yekudiridza inofanira kuchengetwa nemvura yakapfava uye inodziya, iyo isingafanirwe kuchengetwa.
Ruvara rweBrunfelsia runonhuhwirira uye rwakadzika pepuru, asi runopera kune chena mukati memazuva maviri kusvika matatu uye wozopera. Inoyerera yemuti iwo wakawanda, asi nekuda kwehupenyu hupfupi hwemaruva iwo ari akasiyana mavara. Zvinokurudzirwa kucheka zvese zvimedu muhafu mushure menguva yekurimwa. Izvi zvinomutsa kukura kwevechidiki stems.
Mbeu yakapfava - neyakagurwa, ine mashoma matatu mapfundo, ayo, zvisinei, anotora midzi zvishoma nezvishoma. Mbeu zvakare nzira inogona. Kana uchinge uchinge wachinjirwa, tembiricha uye chinyoro chinofanira kunge chakakwira, saka zviri nyore kuitwa pasi pegirazi, asi moyo murefu unodikanwa.
Brunfelsia, maruva exotic, mavara akanaka, maruva akanaka, maruva ane muchetura, maruva eimba, maruva ane muchetura, maruva, maruva eimba anoyerera, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Pane maviri emitemo yakakosha yekudyara maruva - kuve nechokwadi kuti nzvimbo yacho yakakodzera uye ...
Artistic shongedzo ye villa uye gadheni
Isu tinopa mazano anonakidza ekushongedza mubindu kana villa. Artistic uye nyowani pr ...
Nzira yekushongedza nayo tafura yeValentine Zuva |
Zuva reValentine - tafura yekushongedza kwetafura. Zvisingadzivisiki, zororo rino rinogara rakabatana ...
Akanaka mavara emavara evhuru inotonhorera. Ngativake nzvimbo yakanaka, yakarongedzwa neyako yaunofarira ...
Gadzira yako kadhibhodhi emabhokisi ezai
Isu tichakuratidza iwe zano maitiro ekugadzira mhando roses kubva pamakadhibhodhi mabhokisi kana bark ...
Nemazano aripo ezvakanaka zvekugadzira gadheni, tichaedza kuratidza zvakare zvinoshamisa ...
Kuzadzikiswa kwemaonero ese ekuronga nzvimbo yakatenderedza imba kunoda ...